Sivana Instagram: inona avy ireo, inona no misy ary ahoana no fomba hamoronana iray | Famoronana an-tserasera
Encarni Arcoya | | Tambajotra sosialy
Instagram dia nanjary iray amin'ireo tambajotra sosialy matanjaka indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy, nahatratra ny hafa toa ny Facebook na Twitter. Miorina amin'ny sary, dia tsy izy ihany no mampiavaka azy, fa koa amin'ny sivana Instagram, izany hoe, sosona hamoronana endrika am-boalohany ny sary zarainao, na mba hanatsarana azy.
fa, Inona avy ireo sivana Instagram? Firy ny isan'izy ireo? Ahoana no ahazoan'izy ireo? Azo foronina ve izy ireo? Izany rehetra izany sy ny maro hafa dia izay horesahintsika manaraka amin'ny bilaogy.
1 Inona avy ireo sivana Instagram
2 Karazana sivana Instagram
2.2 Sivan-tantara amin'ny Instagram
3 Ny mahasamihafa ny sivana Instagram sy ny fomban'ny Tantara
4 Azo foronina ny sivana Instagram vaovao
5 Ary ahoana no ampakaranao ireo sivana noforoninao tao amin'ny Instagram?
Inona avy ireo sivana Instagram
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny sivana Instagram dia azo faritana ho andian-dahatsoratra izay azo apetraka amin'ny sary apetrakao amin'ny sehatra ary manova ny endrik'ilay izy, na hamoronana sary hafa, hanatsarana ny kalitaony sy ny lokony, na hisintomana ny sain'ny mpampiasa fotsiny rehefa navoaka izy.
Ampiasaina bebe kokoa izy ireo, ary na dia misy aza ny ady hevitra momba ny fampiasan'izy ireo, ambonin'izany rehetra izany satria amin'ny tranga maro dia "voafitaka" ireo mpampiasa amin'ny fampisehoana sary tsy tena izy, dia mbola mirongatra ihany izy ireo ary hafahafa ny sary dia navoaka "voajanahary" tao amin'ny tranonkala.
Karazana sivana Instagram
Mikasika ireo karazany, tsy maintsy milaza aminao izahay fa, na dia maro aza no mieritreritra fa iray ihany, mifandraika amin'ireo tantara, raha ny tena izy dia misy karazany roa.
Rehefa teraka tamin'ny voalohany ny Instagram, ny fomba famoahana azy dia nitovy tamin'ny tambajotra hafa, izany hoe mampakatra sary ianao, mametraka lahatsoratra ary dia izay. Mbola eo izany fomba izany, ary rehefa mampakatra ny sary ao amin'ny Instagram ianao, ankoatry ny mipoitra mba hahafahanao manamboatra azy io na lehibe kokoa, mamela anao hametraka sivana, inona? Eny:
Ireo noresahintsika ireo no tonga tampoka, saingy tokony ho fantatrao fa raha tonga amin'ny farany ianao ka manome azy hitantana, maro ny sivana maro no hiseho fa azonao atao ny mamorona sy mamorona sosona manokana amin'ny sarinao izay ovao izy.
Sivan-tantara amin'ny Instagram
Taona vitsivitsy taty aoriana Nipoitra ny tantara Instagram. Miresaka tantara Instagram izahay ary tokony ho fantatrao fa samy manana ny sivan'izy ireo tanteraka amin'ireo teo aloha izy ireo. Maro amin'izy ireo no hita maso kokoa ary nisy tany am-boalohany, satria izy ireo dia milalao kely amin'ny effets spécial.
Amin'ity tranga ity dia ireto no azonao atao:
Ady Star Yoda Baby
Maso tonga lafatra.
rehetra Ireo sivana ireo dia azo alefa amin'ny alàlan'ny fanolorana ny rantsan-tànanao amin'ny faran'ny efijery havia (na havanana) miankavanana (na ankavia), satria izay hita etsy ambany amin'ny balaonina kely, dia tsy sivana, fa vokany.
Ny mahasamihafa ny sivana Instagram sy ny fomban'ny Tantara
Ao anatin'ireo tantara Instagram, eo amin'ny farany ambany, dia hahita vitsivitsy ianao Balaonina kely manova tanteraka ny sary ampidirinao, na selfie anao io na sary misy anao. Betsaka no very hevitra amin'ny finoana fa ireo no sivana amin'ny Instagram, raha tsy izany. Nantsoina hoe fomba izy ireo, ary nantsoina toy izao izy ireo satria mahay manova ny sary, na mampiavaka ny endrikao, mametraka satroka, mahatonga anao ho vahiny ...
Mifanohitra amin'izany no izy, ny sivana dia manondro ny fanovana ny lafin'ny fijery ny sary, milalao ny loko, fa tsy misy zavatra hafa. Raha atao teny hafa, izy ireo no tsotra indrindra sy mahazatra indrindra hitanao rehefa mampakatra sary (ny fomba mahazatra) na manova ny feony ao anatin'ireo tantara.
Azo foronina ny sivana Instagram vaovao
Ny fanontaniana manaraka azonao apetraka amin'ny tenanao dia raha afaka mamorona sivana Instagram anao ianao, ary ny valiny dia eny. Raha ny marina, na ny fomba fampiasa na ny sivana, maro no nanana ny hevitra nitovizanao ary nanomboka izany tamin'ny fahitana ny fomba nanjary viralin'ny famoronana azy ireo ary mpampiasa an-tapitrisany maro no namorona azy.
Hanao azy, mila manana programa manampy anao hamorona azy ireo ianao.
Amin'io lafiny io dia maro ny rindranasa hampiasaina, fa ireto kosa izay anoloran-kevitray ireto:
Izy io dia rindrambaiko iray manome anao ny fotoana ahafahana manana sivana maimaimpoana (ary koa aloa) mba hanovana ny sarinao. Anisan'izany, manana sivana FX ianao (izay toy ny an'ny Instagram); sivana majika, tena mamorona amin'ny sarinao; sivana taratasy; sivana miloko ...
Ny zavatra tsara dia izany azonao atao ny manova azy ireo ary izany dia hahatonga anao hanana sivana namboarina tanteraka araka izay tianao. Avy eo dia mila mampakatra ilay sary ao amin'ny Instagram fotsiny ianao.
Izahay efa nilaza taminareo tamin'ny fotoana hafa momba ny VSCO, sy ny tombony rehetra azony. Atsipazo ny vitsivitsy ny sivana maimaimpoana fa ny zavatra tsara momba ity app ity dia ny ahafahanao mamorona anao manokana. Raha vantany vao vitanao izany dia azonao atao ny manangona azy ary mampihatra izany amin'ny sary hafa.
Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny PC-nao sy amin'ny findainao. Amin'ny farany dia manana maromaro ianao sivana maimaimpoana azonao ampiharina amin'ny sarinao ary tehirizo ny valiny.
Na azonao atao ny mamorona ny anao manokana ary tehirizina ny fikirakira ampiasanao amin'ny sary hafa.
Ary ahoana no ampakaranao ireo sivana noforoninao tao amin'ny Instagram?
Mba hahafahana mamoaka sivana Instagram amin'ny tambajotra sosialy, ilaina ny mahafeno ny fepetra takiana na Facebook na Instagram. Ho fanampin'izay, tsy maintsy misoratra anarana ho mpamorona amin'ny sehatra roa ianao satria raha tsy izany dia tsy ho afaka hiditra ianao.
Raha ny marina, amin'izao fotoana izao Maherin'ny 20000 ny mpamorona ary ao anatin'ny vondrona beta mihidy izy ireo. Aza matahotra anefa, azonao atao ny mampiditra azy raha mbola mampifandray ny kaontinao Instagram amin'ny kaonty Facebook anao ianao ary manaraka ny dingana lazain'izy ireo aminao ao amin'ny Spark AR Studio.
Raha vantany vao manao ianao, ary manaiky anao izy ireo, dia azonao atao ny mampakatra ireo sivana Instagram:
Tsy maintsy mampakatra ny rakitra naondrana ianao (avy amin'ny Spark AR).
Fenoy ny anaran'ny sivana, mpanoratra ary ny zavatra ataony.
Ampidiro ny video izay anaovana ilay horonantsary hijerena "mivantana".
Ampidiro ny kisary ho an'ny sivana.
Hanome lanja ny zavaboarinao izy ireo ary, raha hitany tsara izany, apetrak'izy ireo izany ary azonao zaraina amin'ny olon-kafa rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Tambajotra sosialy » Sivana ao amin'ny Instagram